လယ်ပရီလ်ကျမ်းစာကျောင်းဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း | Real Conversion
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တို ဘာလ(၂) ရက်နေ့၊ လောစ့်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသေင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ထိုကျေးဇူးတော်ကို မိမိချစ်တော်မူသောခရစ်တော်၌ ငါတို့အားပေး တော်မူ၏” (ဧဖက်၁း၆)။
ကျွန်ုပ်သည်ခုနှစ်တုန်းက နာမည်ကြီး ဧဝံဂေလိဆရာဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း၏ ဘ၀ အသက်တာကို လေ့လာပြီးလေ့လာဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဂျွန်းဆုန်း၏ ဘ၀ အသက် တာကို လေ့လာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်ဘ၀နှင့်အလွန်ဆင်တူသော အချက်များနှင့် ထူးခြားသော အချက်များစွာရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ဒေသာနာတော်ကို ဖတ်သူပရိသတ်များကလည်း စိတ်ဝင် စားကြ မည်ဟုထင်မိပါသည်။
ဂျွန်ဆုန်း၏ ဘ၀အစောပိုင်းနှင့် ကျွန်ုပ်ဘ၀အစောပိုင်းသည် ထူးခြားနားချက် များစွာ ရှိနေပါသည်။ သူသည် ခရစ်ယာန် မိသားစုမှ ပေါက်ဖွါး လာသူ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မူကားခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ပေါက်ဖွါးလာသည် မဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်၏ဖခင်သည် ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားသမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ဒေါက်တာဆုန်း၏ ဖခင်သည် သင်းအုပ် ဆရာတပါး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာဆုန်း၏ဖခင်က သူ့သားအား အမူတော်ဆောင် တဦး ဖြစ်စေချင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖခင်မူကား ထိုသို့အမူတော်ဆောင်တဦး မဖြစ် စေချင်ခဲ့ပါ။ ဒေါက်တာဆုန်းသည် ဥာဏ်ထက်မြတ်သူဖြစ် အမေရိကန်နိူင်ငံ တက္ကသိုလ်၌ (၂၁)လ အတွင်းဖီအိပ်ခ်ျဒီဘွဲကို အသက်၂၀နှစ်အရွယ်တွင် ရယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် သည် အထက်တန်းပညာကိုတစ်နှစ်အတွင်းချင်းမအောင်ဖြစ်ခဲပါ။ အထက်တန်း အောင် မြင်ဖို့ ညကျောင်းပင် တက်ခဲ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကျောင်း၌လည် နှစ်ချင်းမအောင် မြင်ခဲ့ပါ။ သိုသော်လည်း ကျောင်းမထွက်ခင် ကျွန်ုပ်၏ အသက်တာ ပြောင်းလဲနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဆုန်းသည် အမြဲတမ်းလိုလိုပင် ထက်မြတ်သော ကျောင်းသား ဖြစ်သည်။သူသည် ဘွဲဒီဂရီရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူသည်ဓါတုဗေဒပညာရပ်ဖြင် ဘွဲ့ကို၉လအတွင်း ရယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဓါတုဗေဒ ပညာရပ်ဖြင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ၂၁လအတွင်း ရယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မူကား ကျွန်ုပ်အသက်တာ ပြောင်းလဲပြီးသည်အထိ ဆင်းရဲ့နွမ်းပါးလျက် ပညာသင်ကြား ခဲ့ရ ပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ကျရှုံးခဲ့ဖူးသည်။ ပထမနှစ်ကောလိပ်ပညာ သင်ကြားစဉ် တွင်လည်း ကျရှုံး ခဲ့ဖူးသည်။ သူသည် ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း တက်ရောက် စဉ်တွင် အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မူကား ကောလိပ်ပညာဒုတိယအကြိမ် မဖြေဆိုခင် အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကျွန်ုပ်သည် ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလရက် နံနက် ဆုတောင်းတ်ပြုအစီစဉ်၌ ဒေါက်တာချားလ်ဂျေဝုဘရိခ်ျ ဟောကြားသော ဒေသာနာတော်အားဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့ သူဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာတဆုန်းမူကား၊ နယူးယောက်မြို့ Uညငသည Thနသူသါငခal Sနာငညမေပ ယူနီယံဓမ္မဗေဒဆိုင်ရာကျောင်း၊ ပထမနှစ်အကုန် အသက်တာ ပြောင်းလဲ ခဲ့သူဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုခဲ့သည်။
ဒေါက်တာဆုန်း၏ Union Seminary (လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သော ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း၌ တက်ရောက်စဉ် ဘ၀အတွေ့အကြုံသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၌လည်း ထိုအတွေ့ အကြုံဆင်တူဖြစ်ပျက် နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ဟန်တိန်တန်ပက်စ် အသင်းတော်၌ အသက်တာမပြောင်းလဲခင် ကျမ်းစာကျောင်းတက်ရောက်ဖို့ အခေါ်ခံရပါသည်။ ဒေါက်တာဆုန်းကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တရုတ်တ်နိုင်ငံ၌ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရန်ဆန္ဒ ငြင်းပြခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဂျိမ်းစ်ဟာဆန်တေလာနုင့်ဂျွန်ဝီသလီ၏ ခရီးစဉ်စာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည် ထိုင်ဝမ်နှင့် ဟောင်ကောင်သို့ သာသနာပြုသွားရောက်ရန်ဘုရားရှင်ခေါ်ခဲ့သည်ဟု ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် အစောပိုင်း ကျွန်ုပ်သည် တရုတ်ဘာသာစကားကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း လောစ်အိန် ဂျယ်လိတ်မြို့ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း စတင်ဝင်ရောက်သောအခါ တရုတ် ဘာသာစကား လေ့လာခြင်း ပျက်ပြားခဲရပါသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဇနဝါရီလတွင်၊ လောစ့် အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ ပထမတရုတ် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အသက်(၁၉) နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ထိုနှစ်ဓမ္မပညာ သင်ကြားရေးနှစ်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချိန်ဇယား ပြန်ကျက် နေသည်။ ညအစီစဉ်၌သာ ဓမ္မကျမ်းစာသင်ကြားခဲ့ရသည်။ Sကညိပေ Sခ့သသူ သင်ကြားပေးရသည်။ တနင်္ဂနွေညတိုင်း ဂျူနီယာအသင်းသား၊သူများအား တရားဟောကြားရသည်။ တရုတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၌ သောကြာည၊ စနေညများ၌လည်းအခြားသော တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ရသည်။ နေ့အချိန်တွင် အလုပ်ရပြီးညအစီစဉ်၌သာကျမ်းစာသင်ကြားရခဲ့ရသည်။ သောကြာညနေပိုင်းမှ တနင်္ဂနွေညနေပိုင်း အထိဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အမှန်တကယ် ပင်ပန်းခဲ့ရသည်။ ကျောင်းအုပ် ရာထူးလျာထားသော ရိက်ချားစ်နိတ်ဇွန်လမ်းညွှန်သည့် အတိုင်းကျွန်ုပ်ဥည် ဒေါက်တာနော်မန်ဗင်း ဇန်စ်ပီယာ ရေးသားသော The Power of Positive Thinking ကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာပီယာသည် (လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သမား) ဖြစ်မှန်းထိုစဉ်ကမသိခဲ့ပါ။ သို့သော် သူရေးသားထားသော ခေါင်းစဉ်တစ်ခုက ကျွန်ုပ်အားစိတ်ထဲ၌ စွဲမြဲစေခဲ့၏။ထိုခေါင်းစဉ်၌ ဖိလိပ္ပိ၄း၁၃ ကိုဒေါက်တာပီယာရေးသားခဲ့သည်။
“ငါ့ကိုခွန်းအားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသော အမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏” (ဖိလိပ္ပိ ၄း၁၃)။
ထိုကျမ်းပိုဒ်၏ဂတိတော်သည် ကျွန်ုပ်ဘ၀အသက်တာ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ သည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ဖိလိပ္ပိ၄း၁၃ကို နေ့တိုင်းပင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခဲ့ရ၏ ထိုစဉ် ၎င်းဂတိတော်က ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်အား အမှန်တကယ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ နေ့ခင်းဘက်တွင် ကယ်လီဖိုးနီး ယားပြည်နယ် ကောလိပ်ကျောင်းသားဘ၀ကိုနှင့် စည်ပင်သာယာရေး အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီး ညဘက်အစီစဉ်၌ ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း၌ ပညာသင်ကြားရသည်။ အပတ်စဉ် သောကြာညမှတနင်္ဂနွေညဆိုအထိ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ မအားမလပ် အလုပ်လုပ်ရပါသည်။ ၁၉၇၀ခုနှစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လေ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ နွေဦးရာသီချိန်တွင် ဓမ္မဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။- လူတိုင်းအတွက်ယေရှုဓမ္မသီချင်းကိုထပ်မံသီဆိုသည်။
ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သည် တောင်ဘက်ခြမ်းနှစ်ခြင်း လွန်ဗန်ရှင်းနှင့် တွဲဖက် ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားဘိသိက်ခံယူဖို့ ကျမ်းစာကျောင်းကိုသွားရန် တောင်ဘက်ခြမ်း နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ကညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၀ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလက ကယ်လီဖိုးနီးယားဟန် တိန်တန်ပက်စ်ပထမနှစ်ခြင်း အသင်းတော်၌ တရားဟောရန် လိုင်စင်ရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ၎င်း ၁၉၇၀ခုနှစ် Bachelor's degree ကိုရရှိသော်ငြားလည်း ၎င်း Master of Divinity (M.Div.) ဘွဲ့ကိုနောက်နှစ်မသင်ကြားပါကဘိသိက်မပေးသောကြောင့် ထိုသမ္မာ ကျမ်းစာကျောင်း၌ ပညာသင် ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Talbot School of Theology at Biola ၌ပညာသင်ကြားရန် ငွေကြေးမလုံလောက်သောကြောင့်၊ဆန်ဖရန်စစ်ကိုအနီးမာရိန်းမီလ်ဗီလဲ၊ Golden Gate Baptist Theological Seminary ၌ ဓမ္မပညာ သင်ကြားရန် အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်း ကျမ်းစာ ကျောင်းသည်ငဘနမa ဖြစ်သော်ငြားလည်း ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာတိမောလင်းကခသညျနမလအေငလန Thနသူသါပနှင့် ကျမ်းစာကိုအသေအချာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်ုပ်အား သင်ကြားပေးထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အား နားလည်သိရှိမှု များစေခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်အား Golden Gate Seminary သို့ဓမ္မပညာသင်ကြားရန် စေလွှတ်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုကျောင်းတော် သွားရောက်ပညာသင်ရန်မှာအကြံဥာဏ်ကောင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ထိုကျောင်း၏ သင်ကြားခြင်းကလက်တွေ့ အမူတော်ဆောင်ဖို့ရန်မှာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မူများ ကလွှမ်းမိုးနေခဲ့သည်။ Golden Gate Seminary onf 1926 ခုနှစ် နွေရာသီ၌ ဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း တက်ရောက်ခဲ့သောနယူးယောက်မြို့ Union Theological Seminary ၌သင်ကြားသမျှ သည်လည်း Golden Gate ၌သင်ကြားသောဖြစ်နိုင်ချေ အလားများကိုသာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ ဂျွန်ဆုန်း၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရေးသူက Union Seminary အကြောင်း ထိုကဲ့သို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ (ဂျွန်ဆုန်း) မကြာမှီဂျွန်ဆုန်းက သမ္မာကျမ်းစာတော်နှင့် ခရစ်ယာန်တို့၏ အခြေခံယုံကြည်ခြင်း သည် ဒေသာနာနှင့်သက်ဆိုင်ပေသည်ဟု တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ပြဿနာအကြောင်း တရားတိုင်းကို လူ့ညာဏ်အားဖြင့်သာဖြေရှင်းခဲ့ သည်ကိုတွေ.ရပါသည်။ သမ္မာကျမ်း၌ ပါသမျှ အကြာင်းအရာ များသည် သိပ္ပံနည်းကျကျအံ့ဝင်ခွင်ကျမဖြစ် သည်ကိုတွေ.ရပါသည်။ ယုံကြည်ခံယူချက်သည်လည်း အဓိပ္ပါယ် မရှိလှပေ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း သည်သမိုင်းမဆန်ပါ။ အံ့ဩဖွယ် လက္ခဏာများ သည်လည်း သိပ္ပံနည်းလမ်းမကျပေ။ ယေရှု၏ သမိုင်းစဉ်သည်လည်း စိတ်ကူးယဉ်မျှသာဖြစ် လက်တွေ့မဆန်ပေ။ ကိုယ်စား အသေခံပေးခြင်းနှင့် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ကိုလည်း ငြင်းပယ်ထားပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိဟူ၏။ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်ပြီး လူသားဖြစ်ခြင်း သည်လည်း သနားစရာ၊ ရယ်မောစရာကောင်း၏ဟု ရေးသားသည်။ (Leslie T. Lyall, A Biography of John Sung; Flame of God in the Far East, Overseas Missionary Fellowship, 1965 edition, pp. 29-30). ဤအကြောင်းအရာများသည် ကျွန်ုပ်မာစတာအတန်းကို Golden Gate Seminary ၌သင်ကြားသကဲ့သို့ ထပ်တူဖြစ်နေပါသည်။ ကျမ်းစာကျောင်း၌ ဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်းသည် ငယ်ရွယ်စဉ် ကသင်းအုပ်ဆရာ ဖြစ်သောဖခင် သင်ကြားသမျှနီးပါး ပျောက်လွှင့်ကုန်ပါသည်။ သူသည် ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့်တောင်ဝါဒကို သင်ကြားလေ့လာခဲ့သည်။ သူလိုချင် ရှာဖွေခဲ့သော ငြိမ်သက်ခြင်းကို (Lao-Tze) လောင်ဇေစ့်၏ သင်ကြားခြင်းကသာ ယူဆောင်ပေးကောင်း သည်ဟု ခံစား လာခဲ့သည်။ သူသည်လောင် ဇေစ့်ကိုတောင်တက်ခြမ်းဟု ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ တရုတ် အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များ၏ စာအုပ်ကိုလည်း ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ သူ၏အိပ်ခန်းတွင်လည်း ဗုဒ္ဓကျမ်းကန်ဂါထာကိုလည်း ဖတ်ရွတ်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓတရား၌ ရေးသားထားသကဲ့သို့ မိမိ ကိုယ်ကိုမိမိ ငြင်းပယ်မုန်းတီးခြင်း ကအကျွတ်တရားကို ရရှိခဲ့သည်ဟူသော ဗုဒ္ဓကျမ်းကန်းကိုလည်း ဖတ်ကြား ခဲ့သည်။ သူ၏စိတ်နှလုံးသည် အမှောင်ထုထဲသို့ ကျရောက်ခဲ့ပေပြီ။. သူပြောကြားရေးသားသည်မှာ ငါ့ဝိညာဉ်သည် သဲကန္တာရထဲ၌ ပြေးလွှားနေသည်ဟု ရေးသားခဲ့၏။ ငါ့နှလုံးသားသည်လည်း မငြိမ်းမသက် ပျော်ရွှင်မှုမရှိဟူ၍ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ Rev. William E. Schubert ရေးသား” ကျွန်ုပ်ဂျွန်ဆုန်းကို သတိရသည်” ဟူသော ဒေါက်ဆုန်၏ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတိကို www.strategicpress.org. ၌ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဒေါက်တာဂျွန်းဆုန်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံ မြောက်များစွာ ကဲ့သို့ Golden Gate Baptist Theological Seminary ü ကျွန်ုပ် စာသင်နှစ်တတိယနှစ်၌ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ဓမ္မပညာသင်ချိန် တတိယနှစ်ပြီး မြောက်သောအခါ တကိုယ်ထဲအထီးကျန်နေရ၏၊ စိတ်ဖိစီး ခြင်းခံရ၏၊ သာသနာပြုသွားရန်ကို အဆိုးအကောင်း အလေးထား စဉ်းစားခဲ့သည်။ ဤအချိန်၌ ကျွန်ုပ်ခံ စားချက်များသည် ဒေါက်ဆုန်း၏ခံစားချက်နှင့်အလားတူဖြစ်သည်။ “လူတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်။
လူတိုင်းအတွက်ယေရှု နေ့ရက်အချိန်နာရီတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်
သို့ပါသော်လည်း ထူးခြားသောကွဲပြားခြားနားချက်တစ်ခုသာ ရှိသည်။ ဂျွန်ဆုန်းက အသက် တာမပြောင်းလဲသေးပါ။ ကျွန်ုပ်မူကား ၁၉၆၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း စစ်မှန်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မူကား Gသိူနည Gအေန Sနာငညမေပ မတိုင်ခင်ဘိုအိုလာ ကောလိပ်၌ ပင်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ထူးခြားသောအသက်ရှင်ခြင်း ယေရှုအသွေးတော် အားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်နေပါသည်။ ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း၌ ထပ်တူစိတ်ဖိစီး ခံစားမှု ရှိခဲ့ကြသည်။ဒေါက်တာဆုန်းသည် ခရစ်တော်ထံပြန်လှည့်လာပြီး အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အား ယေရှုဘုရား၌ ပြောင်းလဲပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သာသနာပြုမသွားနိုင်ရန် စာတန်မာန်နတ်ကသွေးဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသော ညဉ့်နက်(၂) နာရီအချိန်တွင် ကျမ်းတစ်ချက်က ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံး သားထဲစီးဝင်လာခဲ့ပါသည်။ “ထိုကျေးဇူးကို မိမိချစ်တော် မူသော ခရစ်တော်၌ ငါတို့အားပေးတော်မူဟူ၏။” (ဧဖက်၁း၆) ကျွန်ုပ်သည်ချက်ချင်း အိပ်ရာ မှနိုးထပြီး ၎င်းကျမ်းပိုက်ကို ရှာဖွေဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်က ဤကျမ်းသည်သင့်အဖို့ ဖြစ်၏ ဟူ၍ ဆိုလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ “သင်သည်ထိုသို့ကျေးဇူးကိုခံရသောသူ” ဖြစ်၏။ “သင်သည် မိမိ ချစ်သော ခရစ်တော်၌ ရှိနေသောကြောင့်” ဖြစ်၏။ တဦးတယောက်ကမှ သင့်ကိုမချစ်သော်လည်း ငါသင့်ကို ချစ်၏။ “သင်သည်မိမိချစ်တော်မူသော ခရစ်တော်ယေရှု၌ ရှိနေသောကြောင့်” ဟူ၏။ ကျွန်ုလည်းထ၍ ခုန်လျှက် အနွေးထည်ကိုဝတ်ဆင်ကာ ကျမ်းစာကျောင်း နောက်ဘက်ထောင့် လူစာကလေးသို့ ညအမှောင်ထဲပြေး၍ ချီးမွမ်းမိတော့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆန်ဖရန်စစကို၌ နေစဉ်ထိုတောင် ပူစာကလေးသို့ အချိန်တိုင်းသွားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆန်ဖရန်စစ်ကိုမှ အရှေ့တောင်ဘက် ခြမ်း၏ မီးအလင်း တန်းကိုမြင်နိုင်၏။ အနောက်ဘက်ခြမ်း က တောင်ထိပ် ကိုလည်း မြင်တွေ့ရသည်။ အေးစက်သော ရေမှုန်လေးများက ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်တွေကို ဟွေ့ယမ်းနေပြီး ဘုရားရှင်က ကျွန်ုပ်အား စကားပြောနေဟန် ထင်ပါသည်။ “ယခုတွင်သင်သည် လူတွေကျေနပ်အောင် တရားဟောနေဖို့ မဟုတ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်အားကျေနပ်စေဖို့သာ တရားဟောရမည်။” ယခုတွင် သင်သည် ငါ့အဖို့တရားဟောဆရာဖြစ်နေပြီ။ ဘုရားရှင်က “သင်အိုသည်အထိ သင်အဖို့အလုပ် မလုပ်ရပါ။ ငါ့အဖို့ လုပ်ဆောင်ရမည်။” ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ရာသို႔ ပြန်သွားခဲ့သည်။ အရိုးအဆစ် တုန်ရီ လာ၏ ဤသည် ဘုရားရှင်က အမှုတော်မြတ်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ “လူတိုင်းအတွက်ယေရှုရှင်ဟူ သော ဓမ္မသီချင်းကိုသီဆိုပြန်သည်။”
ကျွန်ုပ်မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ဒေါက်တာဆုန်းကဲ့သို့ သာသနာပြု ဆရာဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ အခုဆိုရင်အသက် ပြည့်ပြီဖြစ၍ အိုမင်းနေပြီ။ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းနေသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၁၉၆၁ ခုနှစ် နှစ် အရွယ်ကဝေးလံခေါင်သိသော အရှတိုက်ဘက်သို့ ဧဝံဂေလိဆရာ အမှုဆောင်ရွက် ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သမျှကို အင်တာနက် မှတရားဟောချက်များ၊ ကျွန်ုပ်ဒေသနာများကို ကိုးကား ကောက်နုတ်ပြီး “ကျွန်ုပ် ၏နေရာ၌” ရပ်တည်ပေးကာ အမှုတော်မြတ်ထမ်းရွက်ကြရန် ဆုတောင်း နေပါသည်။ ကနေ့ညလူငယ် ဆရာတစ်ဦး၏ စကားကို ယူဆောင်လာပါတယ်။ မကြာသေးမှီက သိက္ခာတော်ရဟွာယန်း မလေးရှားနိုင်ငံမှ ထုတ်ဝေခဲ့သော” (Extracts From the Diary of John Sung, Genesis, 2008) ထဲကဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအသက်၄၀ လောက်ကပေါ့၊ လူငယ်အရွယ် တုန်းကဖြစ်သည်။ အာရှတစ်ခွင် ယုံကြည်ခိုင်မာသော ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ တိုးတက် ပြောင်းလဲ ကြသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ၊ ခရစ်တော်ဘုရား၏အမှုပြီးမြောက် ပြီးဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ပေါ် ကြွေးကြော်ခဲ့သောအကြောင်အရာကို အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်ကြဖို့ လိုအပ်နေပေပြီ ဖြစ်၍ ဘုရားရှင်က ခေါ်ဖိတ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း နားလည် သဘောပေါက်သကဲ့သို့၊ ဂျိမ်ဒန်နီကနှလုံးသား အသိစိတ်ဖြင့် ထိုအမှုတော်ကို အာရှတစ်ခွင်၌ သစ္စာရှိရှိလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုနေပေပြီဖြစ်သည် ဆို၏။ ခရစ်ယာန်လူငယ် မျိုးဆက်သစ်အမှုဆောင်များ ယနေ့အာရှတစ်ခွင် နတ် ဆိုးများ အစိုးတရပြုနေသော(မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်သော) ယနေ့ အမှောင် ကမ္ဘာထဲ၌ အမှုတော် ဆောင်ရန်ပေါ်ထွန်းနေပေပြီ။ တကယ်သာမျိုးဆက်သစ် ခရစ်ယာန် လူငယ်များ ရဲ့ရဲ့ဝံဝံ့ဘုရားရှင်၏ အမှုတော်များအတွက်မရှက်မကြောက် လုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုပါက ယနေ့ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ် ရမည်ဟူသော ဘာသာတရားကနေ ခရစ်တော်သခင်၏နိုင်ငံတော် အဖို့၊ ဘုရား ရှင်၏ဘုန်းအသရေ အဖို့အလို့ငှါ ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်နေကြပါလိမ့်မည်။ (Rev. Hwa Young, The Journal Oncc Lost; Extracts from the Diary of John Sung, Genesis, 2008, pp. xiv-xv).
မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ရမည့် ဟူ၍ အယူစွဲသူတို့ အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းနေကြပါပြီး။ သင်တို့အပြစ်အတွက်ယေရှုသခင်ထံ ဝန်ချရမည်။ မိမိတို့၏အပြစ်အားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရပါမည်။ ဂျွန်ဆုန်းသည် ပြောင်မြောက်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ တိကျ၍ မှန်ကန်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသူဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်သူဖြစ်သည် သူပိုင်ဆိုင်သော ဆုတံဆိပ်များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား(ယောင်္ကျား) များအသင်း ဂုဏ်ပြုဆုံသောတံဆိပ်တို့ကို သမုဒ္ဒရာထဲ လွှင်ပစ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ဆွတ်ခူးခဲ့ သော်လည်း ပညာမဲ့လူသားကဲ့သို့ တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်လာပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အaရှေ့တောင် အာရှတစ်ခွင်၌ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုဝေငှခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ဂျွန်ဆုန်းက မိမိ၌ရှိသမျှကို စွန့်လွှတ်ရခြင်းသည်ထိုထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလျှက်ရှိသော အသက်တာ၌ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်၏။သူ့အသက်တာ မပြောင်းလဲခင် အနည်းငယ်မှာ၊ ဘုရားရှင်က ဂျွန်ဆုန်းအား စကား ပြောခဲ့သည်။
“လူသည်ဤစင်္ကြာဝဋ္ဌာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ် ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူး ရှိသနည်း။” (မာကု ၈း၃၆)
သင့်အသက်တာကို နောက်ကြောင်းနောက်ကြောင်း ဘက်သို့ဆွဲခေါ်နေသောအပြစ်၏ လုပ်ရပ် မှန်သမျှ ရပ်တန်းကရပ်လိုက်ပါ။ သင့်အပြစ်အသေး စိတ်ကိုဘုရာရှင်ထံဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အပြစ်အားလုံးကို ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ ဤလောက၏ အလို တော်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ လက်လျှော့လိုက်ပါ။ ခရစ်တော်သခင်အား သင့်အသက်တာ၌ ပထမ ဦးစားပေး လိုက်ပါ။ ခရစ်တော်သခင်၏အသွေးတော် ၌သင့်အပြစ်များကို သန့်စင်ဆေးကြောလိုက်ပါ။ ပြီးနောက် သင့်အသက်တာသည် ခရစ်တော်၏အဖို့ ဆက်လက်၍ ရှင်သန်ပါ။ ကိုယ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်း၊ ရှိသမျှဖြင့်ခရစ်တော်အဖို့ရှင်သန်ပါ။ ကျွန်ုပ်နှုင့်အတူဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းအတွက် စနေနေ့ည၌ ကြွလှမ်း ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှုင့်အတူ တနင်္ဂနွေနံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုချိန်နှင့် ညနေပိုင်းဝတ်ပြုချိန်၌ လာရောက်ပါဝင်ပါ။ ခရစ်တော်သခင်အဖို့ ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ အသက်တာ ဆက်ကပ် အပ်နှံလိုက်ပါ။ ဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း၏ “စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခြင်း’‘ ဟူသော ဒေသနာတော်ကို အင်တာနက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ “လူတိုင်းအဖို့ယေရှုရှင်ဟူသော” ဓမ္မသီချင်းနံပါတ်(၃)ကိုသီဆိုကြပါစို့။
ယေရှုလူတိုင်း၏ယေရှု ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးနုတ်ကယ်တယ်သော တန်ခိုးရှင် တွေးခေါ်လုပ်ဆောင်လေရာ အချိန်တိုင်း၊ နာရီတိုင်းအတွက်ယေရှုရှင်
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိတ်ဖက်စ်မှ ၁၈၄၉-၁၉၁၉ ခုနှစ်၊ ဂျူလီယာဂျွန်စတုန်းရေးသော” အပြစ်တရားထက် ကျေးဇူးတရားကြီးမြတ်၏” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို သီဆို ပေးပါသည်။